erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအမှုများစွာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Zoe Hargreaves, NHS စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
အသက်အရွယ်နုပျိုသောလူဦးအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားသူကိုယောက်ျားမိန်းမတို့, Lancashire စောင့်ရှောက် NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါကနေအထူးပြုထောက်ခံမှုရနိုင်။ မကြာသေးမီကဘီဘီစီ Newsbeat အစီရင်ခံစာအရကြောင့်အွန်လိုင်း porn ရန်လွယ်ကူ access ကိုမှ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေဆင်းရဲခံရသောလုလင်အရေအတွက်ကိုတစ်ဦးမြင့်တက်ရှိသေး၏။
ကနျြးမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များယခုမိမိတို့အနှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အစောပိုင်း 20s အတွက် ပို. ပို. လူတွေကသူတို့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစေဟုပြောရာထိုပြဿနာကိုတွေ့ကြုံခံစားမြင်နေရသည်။
အသက်အရွယ်နုပျိုသောလူဦးအပါအဝင်ပြဿနာကိုတွေ့ကြုံခံစားသူကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမ, Darwen နှင့်အတူဘလက်ဘန်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်မြှင့် (SHARE) ဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်ကကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်အထူးပြုထောက်ခံမှုရနိုင်။
Zoe ကို Hargreaves, Lancashire စောင့်ရှောက် NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါနဲ့ Psychosexual ကုထုံးက "လူအတော်များများဟာတစ်ချိန်ချိန်ကသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝအသက်တာ၌အချို့အခက်အခဲကြုံတွေ့ရပါသည်။ အခြားသူများကိုပိုပြီးအကူအညီလိုအပ်နေချိန်မှာတချို့လူတွေကအကူအညီမပါဘဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
"erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကအများကြီးညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အသုံးပြုမှုဆက်စပ်နှင့်ဤကြောင့်ထိခိုက်သူအငယ်လူများတိုးပွားလာနံပါတ်များကိုရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရည်ညွှန်း၏အများစုအသက်အရွယ်နုပျိုသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအဟောင်းတွေကလူကိုကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့တလျှောက်နှင့်ဤလူမျိုးသည်အမှု-by-ကိစ္စတွင်အခြေခံပေါ်မှာအဆင်ပြေအောင်နေကြကူညီရန်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များကိုဆက်ကပ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကဤကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်လျှင်သူတို့ဝေမျှဖို့သူတို့ကိုရည်ညွှန်းမညျ့သူ၎င်းတို့၏မိသားစုဆရာဝန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ "
SHARE လျှို့ဝှက်အထူးကုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ညွှန်း GPS, သူနာပြုများ, တားဆေးန်ဆောင်မှုများ, သွားဖုံးန်ဆောင်မှုများ, စိတ်ကျန်းမာရေးန်ဆောင်မှုနှင့်လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်နေကြသည်။ တဲ့ professional ချဉ်းကပ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုသို့ရည်ညွှန်းခံရဆွေးနွေးရန်နိုင်ခြင်းပြည်သူ့ 07538 475987 သို့မဟုတ် 01254 283333 သို့မဟုတ်အီးမေးလ်အပေါ်တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Lancashire စောင့်ရှောက် NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါလည်းဓတေားရွေးချယ်မှုနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်စိစစ်နှင့်ကုသမှုပါဝင်သော Lancashire ဖြတ်ပြီးတစ်စျေးကြီးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု (Cash) ပြေး။ ဤဝန်ဆောင်မှုများအခမဲ့နှင့်လျှို့ဝှက်ဖြစ်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုတယ်လီဖုန်း 01772 401140 ရယူသို့မဟုတ် www.cashlancashirecare.nhs.uk သွားရောက်ကူညီ
မူလအပိုဒ်မှ Link ကို
Zoe Hargreave ၏ပင်မစာမျက်နှာ